श्रमिक सूचना र सन्देश – ७१ – आप्रबासी कामदार समाज (आकास) नेपाल
१० जुलाइ २०२०
भिडियो समाचार – लिंकः https://youtu.be/2EE-cvo9ee4?t=2
१- नेपालले दुरदर्शन बाहेक अरू सबै भारतिय न्युज च्यानलहरूलाइ नेपाल बिरूद्ध झुठ्ठा अफबाह फैलाउने र नकारात्मक प्रचारबाजी गरेको भन्दै नेपालभित्रको प्रशारणमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । यसबाट यी च्यानलहरू हेर्न बर्षेनी खर्च हुंदै आएको रू. १ अर्ब पनि जोगिने भएको छ । नेपाल सरकारले भारतिय कामदारहरूलाइ श्रम स्वीकृति दिएपछि मात्रै काम गर्न पाउने नयां नियम बनाएको छ । यदि भारतिय कामदार माथि नै नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइदिने हो भने एकै बर्षमा नेपालको झण्डै रू. ५ खर्ब जोगिनेछ, यसको एक चौथाइ राशी मात्र नेपालीहरूले भारतमा कमाइ नेपाल पठाएको देखिन्छ, बांकि रू. ४ खर्ब जतिको बिदेशी मुद्रा आप्रबासी नेपाली कामदारले बिदेशमा कमाएर नेपाल पठाइदिएका थिए भन्ने नै सत्य हो । अब त्यो रू. ४ खर्ब बैदेशिक रोजगारबाट फर्किदै गरेका नेपालीरूलाइ नै काम दिएर उपयोग गर्न सके राष्ट्रिय हित र राष्ट्रवाद धरातलमा उत्रिने थियो, यो अवसर र चुनौति दुबै हो नेपाल र नेपालीहरूका लागि ।
२- नेपाली राजदूतावास रियादले ८ जुलाइ २०२० सम्म Exit तथा Re Entry भिषा लागेर स्वदेश फर्किन दूतावासमा निवेदन दिएका ७८१ जनाको नामावली सार्वजनिक गर्दै आगामी दिनमा दमाम र/या रियादबाट काठमाडौ का लागि हुने फ्लाइटबारे सेड्युल प्राप्त भए पछि तिनै फ्लाइटमा पठाइने जनाउंदै सूचना जारी गरेको छ ।
३- साउदी अरबको मानव संशाधन बिकास मन्त्रालयले साउदी महिलाहरूको रोजगारीमा लक्ष भन्दा पनि तिब्र र अधिक बृद्धी भएको खुलासा गरेको छ । अहिले समग्र साउदी अरबमा महिला कामदारहरू २७.५% को हिस्सामा रहेका छन, जबकि योजना र लक्ष २४% थियो । यसले समग्र बेरोजगारी पनि १२.९% बाट ११.८% मा झारिदिएको छ । साउदी सरकारले ३९१ जना महिलाहरूलाइ सरकारी तथा निजि क्षेत्रमा ब्यवस्थापकिय नेतृत्व तहमै पुर्याउने गरी आवश्यक तालिम सहितको समायोजन पनि गरेको छ । पछिल्ला केही बर्षहरूमा साउदी अरबमा महिला सहभागिता, योगदान र सशक्तिकरण उत्साहप्रद र अनुकरणीय रहेको छ ।
४- इराकमा सांसद घिदा काम्बासको कोभिड-१९ कै संक्रमनबाट आज निधन भएको छ । पछिल्लो समयमा इराकमा संक्रमन पुनः निकै बढेको छ । आज मात्रै त्यहां २,८४८ जना नयां संक्रमित भए भने ७८ जनाको मृत्यु पनि भएको छ । इराकमा अक्सिजन लगायतका सुरक्षा सामाग्रीहरूको अभाव छ । ४ शन्तानकी आमा ४६ बर्षिय सांसद घिदा उत्तरी बगदादको बकुदा क्षेत्रबाट लगातार ३ पटक सांसदमा निर्बाचित हुंदै आएकी थिइन । उनले इराकमा शिक्षा क्षेत्र सुधार्न र समाज कल्याणका लागि महत्वपूर्ण कानुनहरू पारित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकि थिइन ।
५- अमेरिकाले पनि PIA का जहाजहरूलाइ प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । फर्जी लाइसेन्स प्रकरणका कारण २६२ जना पाकिस्तानी पाइलटहरू पाकिस्तानमै ग्राउण्डेड भएपछि उडान सुरक्षा कै कारण ६ वटा सूचिकृत उडानका सेड्युलहरू रद्ध भएका छन । अमेरिकाका बिभिन्न राज्यहरूमा अडकिएका पाकिस्तानीहरूलाइ स्वदेश ल्याउन कूल १२ वटा चार्टर उडानहरूमध्ये ६ वटा उडान भैसकेपछि अमेरिकाले यो प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
श्रमिक सूचना र सन्देश – १९२
श्रमिक सूचना र सन्देश – ४६
श्रमिक सूचना र सन्देश – ४४८